UGoldie Qayiya ucazela ezinye izinkumbulo zokhuthi wakhula kanjani emzini wendabuko wamaXhosa.
Lapho ngineminyaka eyishumi ubudala, ngasengikhulile ngokwanele ukusiza umama nobaba. Bengazi ukuthi babesebenza kanzima kangakanani futhi bengiziqhenya kakhulu ngabo. Ngakho-ke njalo ekuseni ngathatha umshanelo wami ukuba ngishanele egcekeni ngentshiseko, ngizama ukwenza okuhle nokuhlakanipha njengoba beyikho. Uma ngabe nginesibindi sokuthi ngikotozele emfudumeni wezingubo zami, ubaba wayezofika ngenduku yakhe ukuze aqiniseke ukuthi ngiyavuka.
Kwakungekho umbuzo wokungamlaleli, hhayi ngaleso sikhathi noma naphakade. Sasiqeqeshwe kahle, sonke sibahlanu ebantwaneni, sisebenze kanzima, njengalabo senza, singakhathali. Ngakho kusukela ngosuku lokuzalwa lwami lweshumi kuya phambili, ngehora lesine kwakuyisikhathi engangivuka ngaso.
Ukuhlolwa Kobuntombi Obumsulwa
Lapho sekuyisikhathi sokuhlolwa kwami ubuntombi obumsulwa, umama wayesethenge iduku yasekhukhwini emhlophe yalesi senzakalo. Uma laba besifazane bethola ukuthi ngiseyintombi nto, omunye wabo wayezophuma phandle aphephezelise iduku emadodeni asesibayenil. Ukube bengingeyona intomb nto, lo wesifazane wayezophuma ngaphandle angaphethe lutho. Ngangesabi ukuhlolwa, ngoba ngangingakaze ngibe nesoka.
Kimi, baphezelisa iduku emhlophe. Bonke la madoda bakhululeka, baqala ukumomotheka futhi bavutha amapayipi abo kanye nogwayi. 'Siyabonga, sgiyabonga,' bamemeza kubo bonke abesifazane. Ngaleyo ntambama ubaba wabulala izimvu ngodumo lwami futhi, kusihlwa, saba nomcimbi omkhulu wokugubha. Ukuhlolwa kwentombi kwakuyisibonelo esisodwa esasikhipha isiko lethu lenhlonipho. Kwakunzima kithi amantombazane amancane, kodwa asizange siphike ngoba yayiyingxenye yokuphila futhi mina, ngedwa, angenzanga lutho abazali bami abangayifuni.
Bobabili abazali bami babengabafundisi abaqeqeshiwe futhi ngangithanda isikole. Ngangifuna nokuba nguthisha futhi, emva kweminyaka emithathu esikoleni esiphakeme, ngaya ekolishi lokuqeqesha othisha. Ngaphasa uhlelo lwezifundo kodwa angikwazanga ukusebenza njengomfundisi, ngoba phakathi nonyaka wokugcina, kwadingeka ngishade.
Ubaba wakhetha umyeni wami, u-Otto Qayiya, futhi umkhosi wethu womshado wenziwa ngezinsuku ezimbili, lwesihlanu nesithupha kaJanuwari 1965.
Sibhale izimemo eziningi emaphepheni amancane futhi sinikeza izingane ezincane ukuba zihambise esikoleni ziyenikeza umphathisikole. Ngesikhathi sokuphumula, zonke izingane zanikezwa esinye sezimemo ezincane zokuthatha ekhaya. Ngaleyo ndlela, wonke umzana wawukwazi ngakho. Yile ndlela esasisebenzisa ngayo ekusakazeni izwi ngomshado. Sashada eSontweni Lase-Anglican, saya endlini ka-Otto lapho wonke umuntu wayesilindele ngaphandle, ejabule; abesifazane begqoke amagilavu amhlophe kanye nezingubo zama 1960 eziluhlaza okwesibhakabhaka nombala ophofu, kanye namadoda egqoke okokucecela intombi okumnyama namahembe amhlophe.
Sichithe isikhathi esithile sibingelela wonke umuntu , bese singena ngaphakathi ukuze sidle.Izimvu ezine nenkomo eyodwa enkulu kubulewe. Kwakuyisidlo esikhulu nenyama, ummbila kanye nelayisi kubantu abadala.
Abantu abaningi ezindaweni zasemaphandleni babesagqoka izingubo zendabuko ngenkathi ngikhula. Laba besifazane babeneziketi kanye nobuhlalu futhi amadoda ayegqoke izingubo ezizungezile emahlombe abo, aboshwe okhalweni lwabo.
Laba bantu abazange baye esontweni futhi bagcina izingane zabo zingahambi esikoleni ukuba zinakekele izinsimu zabo zemifino nezinkomo, izimvu nezimbuzi. Izinto zaziphathelene namasiko ondabuko.